Jobho anodemba kuti dai asina kuberekwa (1-26)
Anobvunza kuti nei ari kutambura (20, 21)
3 Pashure peizvi, Jobho akatanga kutaura uye kutuka zuva raakaberekwa.*+ 2 Jobho akati: 3 “Zuva randakaberekwa ngariparare,+Neusiku hwakataurwa nemumwe munhu kuti: ‘Pamuviri pemwana mukomana pabata!’ 4 Zuva iroro ngarive rima. Mwari ari kumusoro ngaarege kufunga nezvaro;Chiedza ngachirege kurivhenekera. 5 Rima gobvu* ngariritore. Gore remvura ngarigare pamusoro paro. Chese chinosvibisa zuva ngachirivhundutse. 6 Usiku ihwohwo ngahuve rima gobvu;+Ngahurege kufara pamazuva egore,Uye ngahurege kuverengwa pamazuva emwedzi. 7 Chokwadi! Usiku ihwohwo ngahurege kubereka;Ngakurege kunzwika kushevedzera kwekufara mahuri. 8 Vaya vanotuka zuva ngavahutuke,Vaya vanokwanisa kumutsa Revhiatani.*+ 9 Nyeredzi dzemambakwedza ahwo ngadzisvibe;Ngahumirire chiedza chezuva chisingauye,Uye ngahurege kuona mwaranzi yemambakwedza. 10 Nekuti hahuna kuvhara masuo echibereko chaamai vangu;+Uye hahuna kuita kuti maziso angu asaona kutambudzika. 11 Nei ndisina kufa pandakazvarwa? Nei ndisina kufa pandakabuda muchibereko?+ 12 Nei paiva nemabvi ekundigamuchiraUye mazamu ekuti ndiyamwe? 13 Nekuti iye zvino ndingadai ndakarara pasina chinondivhiringa;+Ndingadai ndakarara, ndakazorora+ 14 Nemadzimambo enyika nemakurukota awo,Akazvivakira nzvimbo dzava matongo,* 15 Kana nemachinda aiva negoridhe,Aiva nedzimba dzakazara nesirivha. 16 Kana kuti nei ndisina kuita sepamuviri panobva pasingazivikanwi,Sevana vasina kumboona chiedza? 17 Ikoko kunyange vakaipa havachatambudzwi;Ikoko vanga vakaneta vakazorora.+ 18 Ikoko vasungwa vagere zvakanaka pamwe chete;Havanzwi inzwi reanovamanikidza kushanda. 19 Ikoko vadiki nevakuru vakangofanana,+Uye muranda anosunungurwa pana tenzi wake. 20 Anopireiko chiedza uya ari kutambudzikaUye upenyu kune vaya vari kushungurudzika?*+ 21 Nei vachishuva rufu asi rusingauyi?+ Vanoruchera kupfuura zvinoitwa pfuma yakavanzwa, 22 Vaya vari kufara chaizvo,Vanofara pavanowana guva. 23 Anopireiko chiedza murume arasika nzira yake,Akapoteredzwa neruzhowa* naMwari?+ 24 Nekuti kutura befu ndiko kwava zvekudya zvangu,+Uye kugomera kwangu+ kunodururwa semvura. 25 Nekuti zvandaizeza zvauya pandiri,Uye zvandaitya zvandiwira. 26 Handina rugare, runyararo, uye zororo,Asi kutambudzika kuri kuramba kuchingouya.”
^ ChiHeb., “kutuka zuva rake.”
^ Kana kuti “Rima nemumvuri werufu.”
^ Zvinofungidzirwa kuti iri igarwe kana kuti imwe mhuka yakakura, ine simba, inogara mumvura.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Akazvivakira nzvimbo dzisina chinhu.”
^ Kana kuti “vaya vane mweya iri kushungurudzika.”